Andrasana noho izany ny famotorana sy ny fanadihadiana lalina eo anivon’ny mpitandro filaminana mahakasika ity fitaovam-piadiana mahery vaika ity. Ao ireo mpitandro filaminana voasoketa amin’ny varotra fitaovam-piadiana toy itony, tsy azo lavina koa anefa ny trafikana basy tanterahin’ireo tambajotran’olon-dratsy. Raha iverenana ny tranga, lehilahy iray 27 taona izay mipetraka eny Anosibe ity voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny CSP4 Isotry teny amin’ny faritra Andavamamba ny sabotsy lasa teo ity, tamin’ny 3 ora tolakandro resaka famarotana basy PA. Basy poleta miaraka amin’ny “boite chargeur” sy bala 4 no notombanana 1.000.000 Ariary izay raikitra ho 600.000 Ariary ny vidiny. Vokatry ny fanomezam-baovao avy amin’olona tsara sitrapo no nahafantaran’ny polisy fa misy lehilahy iray mivarotra basy PA eny amin’iny faritra iadidiany iny. Natao avy hatrany ny fanarahan-dia sy ny vela-pandrika ka io 19 oktobra io teny amin’ny Shell Andavamamba no tra-tehaka teo am-pivarotana mihitsy io lehilahy io.